Sintering Furnace Fekitori - China Sintering Furnace Vagadziri, Vatengesi
Polymer PTFE Sintering Vira
PTFE sintering viraira Rondedzero 1, yekunamatira sintering choto 2, simbi yakagadzirwa nesimbi 3, anycurve, aircycling tirairi 4, chirongwa-chinodzorwa Zvinyorwa zvaro zvekusvetwa zvinogona kugara gore rimwe chete. Iyo yakawanda sintering maficha anogona kushanda panguva imwe chete uye iyo yekumusoro control inowanikwa.Maficha eRFX Series seinotevera: 1. With yakakwirira insulating ...
PTFE Gesi Rehuni
Suko inogadzira PTFE Sintering Oven inokodzera PTFE zvigadzirwa / zvinoriumba sintering uye zvakare nezve kupisa kupisa. Iyo inopa Sintering Oven muhukuru hwakasiyana maererano nezvinodiwa nemutengi. Yedu PTFE Sintering Oven yakanaka pane tembiricha yakafanana, yakakwira degree yekushandisa uye kugadzikana. ZVIMWE ZVINOKOSHA ü Mukati memhepo kutenderera kwekupararira kwakanaka tembiricha Ex Kuwedzera tembiricha yakatemwa ü Kudzora zvishandiso zvemagetsi zvakapindirana ü Inorema basa rekuvaka ü Imwe chete ine chikwereti chemhando ...
PTFE Sintering Vira
Chigadzirwa Chigadzirwa: PTFE Industrial Nitrogen Sintering Furnace.Capable yekunyora mapepa isina mapepa uye isina-kudzivirirwa chirongwa. Zvinyorwa zvaro zvekusvetwa zvinogona kugara gore rimwe chete. Iyo yakawanda sintering maficha anogona kuvhiyiwa panguva imwe chete uye iyo yekumusoro control inowanikwa. PTFE Sintering Furnace Zvimiro: Sunkoo sintering Furnace inounza yakasimba tembiricha kudzora uye tembiricha zvakafanana mukati mekupisa mukamuri ichipa inoshanda uye inowirirana sintering maitiro kubva kutenderera kuenda cyc ...